Fahafahana ho an’ny hafa sy ho ahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2019 4:10 GMT
Te-hanoratra sy haneho ny hevitro amin'ny alàlan'ny hafa aho. Hitako tamin'ny fikarohana tao amin'ny google ny GV. Fantatro fa tsy ampy fahalalana momba ny asa fanoratan-gazety aho ary mila izany ary mbola mila zavatra betsaka ianarana. Nanapa-kevitra ny hifandray tamin'ny Global Voices aho noho izany ary ho hitako eo raha toa ka manam-bintana aho.
Gaga aho rehefa nahazo valiny haingana. Ka ny “Karnavaly” no lahatsoratro voalohany.
Tsara vintana aho fa manana Toniandahatsoratra tena tsara, Silvia Viñas, manam-paharetana amin'ny fanitsiana sy ny fanamarihana ary ny fianarana ny fomba famolavolana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo feo hafa. Saingy nanampy ahy be dia be ihany koa tamin'ny nahalalako ny zava-mitranga eran-tany sy ao amin'ny firenena izay honenako izany. Ahoana ny fomba hijerena ny fomba fijerin'ny hafa?
Toy ny vao omaly izany ho ahy, saingy efa telo taona sy tapany izao no nandraisako anjara tato amin'ny Global Voices. Tsy misy hatakaloko izany na inona na inona eto amin'izao tontolo izao.
Ankehitriny, manatrika ny Vovonana faharoa aho, satria tany Kenya no fotoana voalohany nanatrehako izany ary afaka nandray anjara tamin'ny vondrona mpaka sary ho an'ny vovonana aho.
Tsy fantatro raha nahay zavatra momba ny asa fanoratan-gazety aho saingy fantatro kosa fa maro ny mpikambana GV tahaka ahy, manerana izao tontolo izao no nanampy, nianatra, nanome ny tsara indrindra avy tamin'izy ireo mba hahatonga ny GV ho vondrom-piarahamonina manerantany, izay ilay tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao raha ho ahy.
Ireto ny sary sasantsasany nalaina tamin'ny Vovonana GV 2012
Azonao jerena ny sary maro hafa nalaina tao amin'ny kaontiko FLICKR